ipc technician yesondlo pc laptop desktop ingxenye isikhathi semfundo antwerp
Senza lokhu kwenzeke
Yini ikhompyutha ebonakala ngayo ngaphakathi? Kanjani zonke izingxenye ndawonye nomunye ukuqinisekisa ukuthi ungadlala umdlalo wakho ozithandayo, Ungakha umsebenzi kukhompyutha yakho ungakwazi ukuxhuma kwi-Inthanethi bese uthumela i-imeyili phesheya zomhlaba? Kungani i-PC yakho ithola kancane, umlayezo wesiphambeko ongaqondakali usho ukuthini futhi kungani uxhumano lwenethiwekhi yakho? Ngixazulula kanjani zonke izinkinga zekhompyutha?
Uma lezi zinto zikuthakazelisa, uchwepheshe we-PC uqeqeshelwe wena. Uzofunda ukuthi ikhompyutha isebenza kanjani, ifunde ikhompyutheni, ifake, ihlanganise, yande, ithuthukise, yakha futhi igcine ikhompyutha yakho.
Kulesi module ngeke ukuthola ulwazi oludingekile ukukhetha izingxenye esifanele PC ukwakha ngokwakho noma ushintsha izingxenye ekhona PC (ugesi, umbadlana, CPU, RAM, HDD, SSD, umsindo nevidiyo amakhadi, ...). Ngaphezu kwalokho, uzofunda ukuvuselela izilungiselelo eziyisisekelo zekhompiyutha, ufake uhlelo lokusebenza, bese ufaka abashayeli abalungile.
Uzofunda kule module ukubeka PC eyakhelwe nemijikelezo ezihambisana ezifana abanyathelisi, scanner, Abaqaphi, njll (kungakhathaliseki endaweni inethiwekhi) bese usetha ukusebenza.
Uzofunda kule module ukwenza izilinganiso, iphutha ukuthola kanye ukuhlonza PC, sebenzisa ithuluzi iphutha uphethwe, ukulungisa kanye nokugcinwa hardware ne-software kumsebenzisi PC. Ngaphezu kwalokho, abasebenzisi bangafunda ukunweba inkumbulo, ukufaka amakhadi ukunwetshwa, a idrayivu kanzima indawo a SSD wafaka yonke isofthiwe, partitioning futhi ukufometha hard drive, uhlelo eziyisisekelo i-PC ukuze senze futhi uyofunda isayithi ikhasimende noma ukude ukusiza ekwenzeni izivivinyo.
Ukuqeqeshwa I-PC Ochwepheshe kuthatha isilinganiso iminyaka emibili kuya kwemibili.
Kuyinto yemfundo ekhombisa ukuthi ungangena futhi uphumelele nganoma yisiphi isikhathi sonyaka.
Imfundo yakho iphela uma ufeze zonke izikhono. Lokhu kungaba njalo phakathi nonyaka wesikole.
Ayikho ulwazi oluthile oludingekayo, kodwa isisusa nokuqondisisa emhlabeni wekhompyutha.
Ukuhamba kwamakhasimende kubaluleke kakhulu, iso ukuze uthole imininingwane futhi ukubhekana nokusebenza komsebenzi futhi.
Unesibopho sokusebenza kahle kwezinqubo zekhompyutha. Ezinhlanganweni ezinkulu ovame ukwenza ngokukhethekile kwisici esincane. Lokhu kungaba mayelana nokulawula, ukuhlaziywa nokusebenza kwenethiwekhi. Ezinhlanganweni ezincane wena uphezulu futhi unomthwalo wemisebenzi eminingi: kusukela ekuhleleni umsebenzi ukuya ekuhleleni nasekusabalazweni kwamadokhumenti enziwe ngekhompyutha.
I-PC yezochwepheshe nemishini yehhovisi
Ufuna izimbangela zokukhubazeka kwento yedatha. Uzobuyisela lo magazini ngokushesha ngangokunokwenzeka futhi ulondoloze. Ngezinye izikhathi usebenzisa isofthiwe futhi ungenele kumanethiwekhi wendawo namakhulu.
Kuncike enkampanini, futhi unakekele ukufakwa nokuqala kokuqukethwe. Noma ngomhlangano, ukufakwa nokugcinwa kwama-PC kanye nezinsimbi, kungakhathaliseki ukuthi kungenjalo kumanethiwekhi enethiwekhi.
Uhlinzeka ngezeluleko ezivamile, ukuqeqeshwa nokusekelwa kobuchwepheshe kumakhasimende.
Uma kunesidingo, qaphela ukusekelwa kwefoni.
Ngemuva kwalokhu kuqeqeshwa, ungaqala ngomqashi noma ebhizinisini lakho, kodwa izifundo eziqhubekayo zokuqeqeshwa kwenethiwekhi ziphakathi kwamathuba.
Yini i-PC Technician efanelekayo?